China Waterproof kunye neMembrane ephefumlayo kubavelisi beDonga lophahla kunye nabanikezeli | JiBao
I-Late-Retardant Waterproof and Breathable Membrane
Umboniso bhanyabhanya weReflective Insulation
I-Synthetic Roof Liner
I-Membrane engangeni manzi kunye nePhefumlo kwiDonga lophahla
I-membrane engangeni manzi kunye nephefumulayo luhlobo olutsha lwezixhobo zepolymer ezingenamanzi. Ngokubhekiselele kwithekhnoloji yokuvelisa, iimfuno zobugcisa zeembrane ezingenamanzi kunye neziphefumulayo ziphezulu kakhulu kunezo zixhobo ezingenamanzi ngokubanzi; ngelo xesha, ngokubhekiselele kwikhwalithi, i-membrane engenamanzi kunye ne-breathable nayo ineempawu ezingenayo ezinye izinto ezingenamanzi. Iinwebu ezingangeni manzi neziphefumlayo zomeleza izakhiwo ezingangeni moya.
I-membrane engangeni manzi kunye nephefumulayo luhlobo olutsha lwezixhobo zepolymer ezingenamanzi. Ngokubhekiselele kwithekhnoloji yokuvelisa, iimfuno zobugcisa zeembrane ezingenamanzi kunye neziphefumulayo ziphezulu kakhulu kunezo zixhobo ezingenamanzi ngokubanzi; ngelo xesha, ngokubhekiselele kwikhwalithi, i-membrane engenamanzi kunye ne-breathable nayo ineempawu ezingenayo ezinye izinto ezingenamanzi. Iinwebu ezingangeni manzi neziphefumlayo zomeleza izakhiwo ezingangeni moya. Ngexesha elifanayo lokuxinwa kwamanzi, ukugqithiswa komphunga okungaqhelekanga kunokukhawuleza ukukhupha umphunga wamanzi ngaphakathi kwesakhiwo, ukukhusela ukusebenza kwe-thermal yesakhiwo semvulophu, kwaye ufezekise ngokwenene injongo yokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla okwakhiwa, ngelixa uphepha ukuzala kokubumba kwisakhiwo, ukukhusela. ixabiso lepropati, kwaye Isombulula ngokugqibeleleyo ingxaki yobungqina bokufuma kunye nempilo yokuphila. Luhlobo olutsha lwezinto ezigcina amandla ezisempilweni kwaye zihambelana nokusingqongileyo.
I-membrane engenamanzi kunye nokuphefumula ihlanganiswe nezinto eziphezulu zokusebenza, ezinokuvumela umswakama ukuba udlule ngokukhululekileyo, kodwa awukwazi ukungena kwakhona emva kokudibanisa emanzini. Ukuze kuqinisekiswe ukuba isakhiwo somile kwaye sikhululekile, kwaye kwangaxeshanye ukuthintela amanzi ajikisiweyo ukuba angonakalise uphahla kunye neendonga zesakhiwo, kunye nokonakalisa izinto zangaphakathi.
Inkcazo yomgaqo wokusebenza we-membrane engenamanzi kunye nokuphefumula: Makhe siqale sihlalutye unobangela we-condensation. Umoya uqulethe umphunga wamanzi ongenambala, odla ngokulinganiswa ngokufuma (RH%). Ukuphakama kobushushu bomoya, kokukhona iqulethe umphunga wamanzi. Xa iqondo lobushushu liyancipha, umoya awukwazi ukuquka umphunga wokuqala wamanzi. Iqondo eliphantsi lobushushu bomoya, ukufuma kwandisa. Xa ukufuma kufikelela kwi-100%, umphunga wamanzi uyajiya ube lulwelo. , Ukujiya kwenzeka. Iqondo lobushushu ngeli xesha libizwa ngokuba yi-condensation point. Kwisakhiwo, ngokude nje umoya oshushu kwisakhiwo uguquguquka kwaye uthinte ubushushu obuphantsi obungenaphahla kunye neendonga, ukudibanisa kuya kwenzeka. Iqondo lobushushu ngelo xesha libizwa ngokuba yi-condensation point. Kwisakhiwo, ngokude nje ukuba umoya oshushu kwisakhiwo uguquke kwaye uthinte uphahla oluphantsi lweqondo lokushisa kunye neendonga, ukunyuswa kuya kwenzeka. Xa ukujiya kwenzeka, kuya kuba phezu kophahla. Okanye amathontsi amanzi abunjwa phezu kodonga, kwaye amathontsi amanzi afunxwa sisakhiwo, ngaloo ndlela etshabalalisa udonga kunye nesakhiwo sophahla, okanye ukuthontsiza kunye nokonakalisa izinto kwisakhiwo, sebenzisa i-waterproof eyodwa kunye nomphunga wokungena kwamanzi. kunye ne-membrane ephefumulayo, ngaphezu kokusebenza njengoluhlu olungangeni manzi Ukongeza, inokusombulula ingxaki yobungqina bomswakama we-insulation layer. Ngakolunye uhlangothi, umphunga wamanzi unokudlula kwaye awuyi kuqokelela kwi-insulation layer; Ngakolunye uhlangothi, ukudibanisa okanye ukukhupha amanzi eluphahleni okanye eludongeni kuya kuhlukaniswa ngokufanelekileyo kwi-insulation material nge-membrane engangeni manzi kunye nokuphefumula, kwaye ayiyi kungena kwi-insulation layer. ukusebenza kwe-insulation layer, kunye nokufezekisa umphumo wokugcinwa kwamandla okuqhubekayo.
I-membrane engangeni manzi kunye nephefumlayo, ekwabizwa ngokuba yi-polymer anti-adhesive polyethylene engangeni manzi kunye ne-membrane ephefumlayo, luhlobo olutsha lwezinto zokwakha ezingangeni manzi kunye nohlaza. Isetyenziswa kakhulu eTshayina. Ikwathunyelwa kumazwe aseYurophu, eMzantsi Melika, eRashiya nakwamanye amazwe kuphahla lwesakhiwo sentsimbi, kwizikhululo zikaloliwe, njl.njl. Umzila kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu, iindonga zamakhethini, kunye neendawo ezithambekayo ziye zasetyenziswa ngokubanzi, kwaye isiphumo siye saqinisekiswa luninzi lweendlela. abasebenzisi.
Ngaphambili: Isithintelo soMphunga Ukubhideka kunye nesithintelo somoya
Okulandelayo: China Umthengisi Gold for China EPDM Rubber Uphahla Underlayment for Water Stop Waterproofing Membbrane
Isithintelo soMphunga Ukubhideka kunye nesithintelo somoya
Iintlobo zophahla lwangaphantsi lwe-Underlayment Synthetic Roof Liner
Yintoni iphepha lokuphefumla? Isetyenziselwa ntoni? H...
Umenzi uvelisa ifilimu echasene nelanga
Iinwebu zokuphefumla zophahla kunye neendonga zokhuni...
IMembrane ekwaziyo ukumelana nedangatya ingenaManzi kunye neNqamnqa ephefumlayo
Igumbi 401, iKomiti yoLawulo yeZowuni yoPhuhliso lwezoQoqosho kwiNqila yaseSuning, kwisiXeko saseCangzhou, kwiPhondo laseHebei.
Iimveliso ezishushu zeHebei Jibao zingangenwa ngamanzi kunye neB...
Ziziphi iimpawu zokungangeni kwamanzi kunye...
© Copyright - 2020-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. Iimveliso ezishushu - Imephu yesiza - AMP Mobile
Isithintelo soMphunga kuMacala omabini eInsulation, Froth-Pak, Umgangatho wangaphantsi odadayo, IVinyl Plank yoMgangatho woMvalo woMvalo, Ilaphu elingalukwanga, Umgangatho ongaphantsi koMgangatho woMphunga,